घरले दर्शकलाई तर्साउँन सक्ला त ? « Mazzako Online
घरले दर्शकलाई तर्साउँन सक्ला त ?
नेपालमा नेपाली हरर चलचित्र कमै बन्छन् र बनेका चलचित्रले पनि दर्शकको मन जित्न सकेको छैन । हरर जन्रको फिल्म मन पराउनेको जमात नेपालमा पनि अत्याधिक छ । तर, हरर लाग्ने नेपाली हरर फिल्म छैन । वर्षमा एउटा जसो मात्रै हरर फिल्म बन्ने गरेका छन् जून हरर कम कमेडी ज्यादा लाग्छन् ।
यस्तै यो वर्ष हरर फिल्म घर रिलिज हुदै छ । अर्पन थापा निर्देशित यो दोश्रो हरर फिल्म हो । उनले निर्देशन गरेको पहिलो हरर फिल्म सुनकेशरी हो । रिचा शर्माको सुनकेशरी दर्शकलाई हरर लागेन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हरर चलचित्र सुनकेशरी हो भन्ने चर्चा खुबै थियो तर रिलिज पछि सुनकेशरीले न त दर्शकको साथ पायो न राम्रो प्रतिक्रिया नै ।
फिल्म सफल भएन । हरर चलचित्रलाई कलाकारको अभिनयले भन्दा पनि टेक्निकल आइडिया, प्रविधिले हरर बनाउने हो तर, त्यो स्तरमा नेपाली चलचित्र पुग्न सकेको छैन । यो अवस्थामा घरले दर्शकलाई हरर चलचित्रको भान गराउन सक्ला त ?
सुनकेशरीले दर्शकलाई भड्काएको छ । हरर फिल्म हेर्ने दर्शक नेपाली हरर फिल्म बाट तर्सिएका छन् । तर, अब दर्शकलाई हरर फिल्म पनि राम्रो बन्छ भन्ने सन्देश घरले दिनु जरूरी छ । सुनकेशरी बाट आलोचना पाएका अर्पणले पनि आफुलाई सावित गर्नु छ र हरर जन्रको चलचित्रको उत्थानको लागि घर एउटा उदाहरण बनि प्रस्तुत हुनुपर्ने छ ।